Iindaba -Ukuhlaselwa ngokuthe ngqo kwindawo yokuqala | umsitho wokuvala ogqibeleleyo
Emva kwemini ngoMeyi 23, 2020, ezonyango zaseSanxin zabamba ukhuphiswano lwentetho “lokuthatha indawo njengendawo” kumgangatho we-6 wesakhiwo seofisi, owawonganyelwe nguZhou Cheng, iziko lokuzenzekelayo.
Umbono yindawo yokuqala yokujonga esijamelana nayo, kwaye yindawo yeTaoist kuthi ukuhlalutya nokusombulula iingxaki. Olu khuphiswano lwentetho lujolise kwi "Scene", simbe amabali asingqongileyo kwaye sabelane ngeemvakalelo, izigcawu, abantu nezinto zeSanxin. Sikhatshwa imini nobusuku kwisikhephe esinye. Simanyene ngengqondo nye kwaye soyise ubunzima. Abantu baseSanxin basebenzisa eyabo indlela ukutolika loo maxesha okufunda nokukhula kunye, intliziyo enye yokuqala kunye nokuqhubela phambili kunye.
Umsitho wokuqala wokunikezelwa kwamabhaso
Umsitho wokunikezelwa kwamabhaso okwesibini
Umsitho wesithathu wokunikezelwa kwamabhaso
Umsitho wokuwongwa ngembasa yenkuthazo
Mnu. UMao Zhiping, umphathi jikelele wenkampani, ushwankathele ukhuphiswano
Okokugqibela, Mnu. Mao Zhiping, umphathi jikelele, wagxininisa: olu khuphiswano lwentetho ayisiyomisebenzi kuphela, kodwa ikwayiqeqesho, unxibelelwano olunzulu kumasebe nakwezikhundla. "Indawo" ikuyo yonke indawo, kunye nesiza njengeziko, injongo njengesikhokelo, qubuda kwiziko le-vortex yendawo, kwaye ucofe ixabiso elinokubakho lomsitho kukusukela wonke umntu weSanxin. Lo nyaka uphela kwesicwangciso seminyaka emihlanu se-13. Abantu baseSanxin kufuneka bahlale bethatha usuku kwaye bangalindi mntu ukulinda ixesha. Kuya kufuneka basebenze kunye ukuhlangabezana nobunzima, bacinge nzulu kwaye bajongane nemiceli mngeni. Kuya kufuneka balwele impumelelo evela kwiinzame, izibonelelo ezivela kwindawo kunye nexabiso lekamva. Ndiyakholelwa ngokuqinisekileyo ukuba ngokuzinikezela kwabo bonke abantu baseSanxin, singadibanisa unobangela omkhulu weSanxin kwinkulungwane edlulileyo kwaye sikhawulezise inkqubo yokuhamba ngomgama omde weSanxin!